को हुन् आफैलाई गोली हान्न लगाउने धर्मगुरु? के हुन्छ कारबाही? – Everest Times News
को हुन् आफैलाई गोली हान्न लगाउने धर्मगुरु? के हुन्छ कारबाही?
२०७५ बैशाख २५, मंगलवार २०:१५
काठमाडौं । गत चैत २५ गते विराटनगरको जतुवामा श्रीमद भागवत सप्ताहका लागि पुगेका आचार्य श्रीनिवासलाई गोली लाग्यो । त्यसपछि हिन्दु धर्मका एक अभियन्तालाई गोली हानिएको आरोपमा उक्त घटनालाई सरकारले तदरुकताका साथ छानबिन शुरु गर्‍यो ।
गोली लागी घाइते भएका उनी न्यूरो अस्पताल विराटनगरमा २१ दिन उपचार गराएर काठमाडौं गएका थिए ।
उनै श्रीनिवासलाई अहिले आफै‌ंले गोली हान्न लगाएको आरोप लागेको छ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले ठीक एकमहिना पछाडि मंगलबार(वैशाख २५ गते) हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
वैशाख २४ मा नयाँ दिल्ली जानै लागेका उनलाई प्रहरीले आफैंले गोली हान्न लगाएको आरोपमा पक्रेको हो । मुद्दामा उनलाई थप अनुसन्धानका लागि १० दिनको म्याद दिएको छ ।
आचार्यलाई गोली हान्ने उनकै अंगरक्षक चितवनको भरतपुर महानगरपालिका बेलचोकका २९ वर्षीय माधव चौधरी, गोली र पेस्तोल व्यवस्था गर्ने नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका-५ का ३२ वर्षीय खान र सन्तोष भन्ने लक्ष्मीराज अधिकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरेर छानबिन गरिरहेको छ ।
श्रीनिवासलाई के सजाय हुन्छ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्ने उक्त मुद्दामा आरोप प्रमाणित भए १ वर्ष कैद वा १ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। उनलाई प्रहार गरिएको पेस्तोल आझै नभेटेकोले उनी छुट्न सक्ने कतिपयले अनुमान गरका छन् । कान्तिपुर दैनिकसँग कुरा गर्दै
अधिवक्ता योगेन्द्र चौहानले आचार्यलाई लगाएको मुद्दामा हतियारसमेत प्रहरीले बरामद गर्न नसकेको अवस्थामा थुनछेक बहसमा छुट्नसक्ने संभावना बढी भएको बताए।
को हुन् श्रीनिवास?
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नजिकका मानिने श्रीनिवासलाई सुनसरीको बराहक्षेत्र चतराधामका हुन् । श्रीनिवास क्षेत्री वर्गका भएपनि कर्मले ब्राम्हण भएका हुन् । यिनको बास्तविक थर विस्ट क्षेत्री हो । उनलाई हालै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भेटेका थिए ।
हिन्दुधर्म र गौसंरक्षणको अभियन्ता रहेका श्रीनिवास विभिन्न स्थानमा पुराणहरू लगाउँथे । श्रीनिवासले पुराण तथा कथावाचनका माध्यमबाट विभिन्न सामाजिक काम हरु समेत गर्दै आएका बताइएको छ ।